January 2018 - Ibsaa Jireenyaa
January 27, 2018 Sammubani Leave a comment
Torbaan darbee mallatoolee guyyaa Qiyaama muraasa isaanii ilaalle turre. Har’as itti fufuun mallatoolee yeroo ammaa argamanii ijaan mul’atan ilaalla. Mallatoolee kanniin qor’achuu fi qo’achuun haala keenya jijjiruun Guyyaa Qiyaamatiif akka of qopheessun nu gargaara. Read more
Mallatoolee Guyyaa Qiyaamaa-Kutaa 1ffaa
January 20, 2018 Sammubani Leave a comment
Guyyaa Qiyaamaa jechuun Guyyaa namoonni du’an hundi awwaalcha isaanii keessaa kaafamuun murtiif Rabbiin fuunduratti dhiyaataniidha. Guyyaa sirnii samii fi dachii itti jijjiramuudha. Guyyaa samiin itti dhodhootu, urjileen harca’an, garreen bakka isaaniti buqqifaman, dachiin garmalee sochootu fi wantoonni nama rifachisanii fi naasisan biroo itti adeemsifamuudha. Guyyaan kuni guddinnaa fi ulfaatinna isaatirraa kan ka’e maqaa adda addaa qaba. Isaan keessaa As-Saa’ah (Sa’aa), Guyyaa Aakhirah (Dhumaa), Yawmul Jam’i (Guyyaa Walitti qabamaa), Yawmud-Diin (Guyyaa Murtii), Yawmul Taghaabun (Guyyaa mu’minoonni bu’aa buufatanii, kaafironni immoo kasaaraniidha), Al-Haaqqah (Guyyaa haqni (dhugaan) ifa bahu), Al-Qaari’a (Rukuttaa jabaa), Gaashiya (wanta hundaa tan Haguugdu) fi kan biroo. Read more
January 13, 2018 Sammubani Leave a comment
Tawhiida jechuun maal jechuudhaa?
Jechi “Tawhiid” jedhu xumura, wahhada, yuwahhidu jedhu irraa kan dhufeedha. Wahhada jechuun tokkichoomse, tokkicha godhe. Tokkichoomsun kan mirkanaa’u nafiyyi (dhabamsiisu) fi isbaat (mirkaneessu ykn raggaasisuun) yoo jiraatedha. Wanta tokko yoo tokkichoomsite, wantoota isaan ala jiran hunda ni dhabamsiista (nafiyyi), Isaaf immoo tokkichummaa ni mirkaneessita (Inni Tokko qofa akka ta’ee ni amanta). Read more
Namootan walitti makamuu bakka afuritti qoodu dandeenya. Read more
SHEYXAANA IRRAA OF TIIKSUF
January 6, 2018 Sammubani Leave a comment
Sheyxaanni diina ifa baha ilma namaa jallisuuf murate ka’eedha. Sheyxaana jechuun maal jechuudhaa? Jinnii jechuun hoo?
Afaan Arabiffaatin jechi “Sheyxaana” jedhu jecha walii galaa fincilaa oftuulaa hundaaf ta’uudha. Walumaagalatti jechi kuni jiraata murtaa’a tokkoof kan itti fayyadamaniidha. Sababni isaas, sheyxaanni Gooftaa isaatti waan fincilee fi of tuulef. Sheyxaanni rahmata Rabbii irraa abdii kute jira. Sababa kanaaf, Rabbiin ibliis jechuun isa waame. Jechi kuni jecha Alabasa fi ublis jedhanirraa dhufeedha. Alabasa jechuun wanti gaariin kan isa keessa hin jirre. Ublis jechuun immoo abdii kutuu fi baduudha.  Read more
Kuusaa Select Month January 2019 December 2018 November 2018 October 2018 September 2018 August 2018 July 2018 June 2018 May 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 July 2015